Vaovao - Famokarana tontolo iainana
Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny fisakaizana amin'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny harena. Vao haingana ny toe-draharaha fiarovana ny tontolo iainana dia marefo, mamaly tsara ny orinasanay ary manatanteraka ny famokarana fiarovana ny tontolo iainana.
1. Esory ireo fotodrafitrasa efa lany andro ary ampahafantaro ny fitaovana efa mandroso. Manafoana ireo fotodrafitrasa efa lany andro izahay ary mampiditra fampitaovana mandroso amin'ny fotoana voafaritra hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana, hampihena ny taham-pako miaraka amin'izay mahatsapa ny fandotoana zero sy ny famokarana micro amin'ny famokarana.
2. Manomàna entana hahatratra ny daty fandefasana nifanarahana amin'ireo mpanjifa mavitrika. Manomàna mialoha ny entana ho an'ny baiko mahazatra mba hahazoana antoka fa azo atao amin'ny mpamatsy ara-potoana ny singa ho an'ny fanodinana sy ny fivoriambe bebe kokoa, mba hanomezana antoka ny fandefasana entana amin'ny mpanjifa ara-potoana.